WASIIRKA AMNIGA SOMALIYA OO SHEEGAY IN LA QABTAY NINKII HOGAAMINAAYAY WEERARKII XEEBTA LIIDO - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirka Wasaaradda Amniga Somaliya, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in gacanta lagu dhigay ninkii horkacaayay xoogagii xalay weeraray Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho.
C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa wuxuu bidhaamiyay in xoogaga ammaanka ay u suurtagashay inay dilaan xubnihii weerarka soo qaaday, marka laga soo taggo in gacanta lagu dhigay ninkii horkacaayay, inkastoo aanu magaciisu sheegin.
Wasiirka oo u waramay Waarbaahintay, ayaa ku celceliyay in laamaha ammaanka ay gacanta ku hayaan ninkaasi, ayna baarayaan, isagoo intaa ku daray in Warbaahinta loo soo bandhigi doono.
Wasiir C/risaaq, ayaa Ururka Al Shabaab ku eedeeyay in weerarkaasi ay ku dileen dad shacab ah oo jewi degan isaga sugnaa. Wasiirka ayaa xusay in weerarkaasi ay Shabaabku ku dileen ugu yaraan 20 ruux oo rayid ah.
Al Shabaab oo sheegatay masuuliyadda weerarkaasi, ayaa waxay ku andacoonaysaa in weerarkaasi uu ka dambeeyay, iyadoo ay Xeebta Liido u tamashlo taggi jireen Madaxda Dowladda Somaliya iyo ajaaniiba.